Tuuu Librería, iphrojekthi yobumbano lapho inani lezincwadi lifike kuwe | Izincwadi Zamanje
Tuuu Librería, iphrojekthi yobumbano lapho intengo yezincwadi ikuwe
Isitolo Sencwadi iTuuu Kungumsebenzi we NGO Yooou enezikhungo eziningana eMadrid. Inhloso yale phrojekthi ukugwema ukubhujiswa kwezincwadi, ukwenza kube lula ukutholakala kokufunda nokukhuthaza umkhuba wokufunda. Bobabili abanikeli nabasebenzisi bangaxhumana nalokhu okusha isitolo sezincwadi sobumbano.
UTuuu Librería yiyona isitolo sokuqala sezincwadi eSpain lapho izincwadi zinenani elicatshangelwa yilelo nalelo: umuntu ngamunye ukhetha ngokukhululekile umnikelo afuna ukuwenzela izincwadi azigcinayo. Ingxenye yenzuzo yomtapo wolwazi isetshenziselwa ukuthumela izincwadi nempahla yesikole ezikoleni eziseMphakathini waseMadrid kanye nasemazweni aseLatin America. Iphrojekthi inomthetho owodwa kuphela: ungathatha kuphela izincwadi ezilingana ezandleni zakho uma unikela ngomnikelo.
ITuuuLibrería yaqala uhambo lwayo ngoSepthemba 2012. Ngenye yamaphrojekthi ama-4 akhiqizwe nguYooou ngenhloso ukwenza ngcono imfundo nokukhuthaza ukufinyelela kumasiko. Lo mqondo waqhamuka kuphrojekthi efanayo ebisebenza ngempumelelo enkulu eBaltimore, e-USA, kusukela ngonyaka we-1999, ebizwa ngokuthi yi-bookthing.org.
Inhloso eyinhloko yeTuuuLibrería ukukhuthaza ukufunda, letha izincwadi eduze ukuze uthole umnikelo kubo bonke abayifunayo, ngaphandle kwesidingo sokuthi babuye. Ngaphezu kwezincwadi, banesigaba esibanzi futhi esihlukahlukene sama-DVD.
Enye yezinhloso zayo ukwenza iphrojekthi ikwazi ukonga futhi ikwazi ukuyigcina isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Ukufeza lokhu badinga usizo: iminikelo yezincwadi nama-DVD, okubhaliselwe okuvela kuma-euro ayi-12 ngonyaka, iminikelo yezimali eyodwa, amahora wokuzinikela ngokuhlela izincwadi nokusiza umphakathi, njll.
Ngokufana nokusebenza kwesitolo sezincwadi nangemikhankaso ethile, bathumela izincwadi nempahla yesikole emazweni, ikakhulukazi eLatin America. Izincwadi ezithunyelwe konke ngezabantwana nezingane, ngoba ukuba nohlelo lwemfundo ngaphandle kweSpanishi, bekungeke kufaneleke ukuthumela izincwadi.
Izincwadi abazithumelayo zivela kubaxhasi abahlukahlukene: abangani bakaTuuuLibrería, abashicileli, izinkampani, njll. Bese bekhetha izincwadi bese bezifaka. Lo msebenzi uvame ukwenziwa ngamavolontiya, iningi lawo elithanda kakhulu izincwadi. Lokhu kuthunyelwa kwesinye isikhathi kufaka izimpahla zesikole nemishini yekhompyutha eza, ikakhulukazi, evela eminikelweni evela ezinkampanini.
“Le phrojekthi ebiqhubeka kusukela ngoSepthemba 2012 ibe yimpumelelo futhi siya ngokuya sifunwa. Labo abasazi selokhu saqala ukubona ukuthi sinezincwadi eziningi kangakanani ezigcinwe emashalofini, ngakho-ke sikhethe ukuvula esinye isitolo sezincwadi ngenhloso yokufinyelela abantu abaningi ", kuchaza u-Alejandro de León, umsunguli weTuuu Librería.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Tuuu Librería, iphrojekthi yobumbano lapho intengo yezincwadi ikuwe
Isinyathelo esihle kakhulu. Siyabonga ngokwabelana!
I-Expotaku Tarragona 2015